Ny tsy fitoviana vaovao dia tsy voajanahary (na ny fomba hafa manodidina?): Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 20 Desambra 2018	• 26 Comments
Eny, zanaka malemy fitia. Ny ara-dalàna vaovao dia tsy mety ankehitriny na tokony hiteny tsy araka ny tokony ho izy ve ny tena ara-dalàna? 'Amin'ny sekoly efa ho 900 eo amin'ny fanabeazana amin'ny sekoly ambaratonga faharoa sy amin'ny ambaratonga faharoa, ny mpampianatra sy ny mpianatra dia mitafy volomparasy volomparasy volomparasy. Manao izany izy ireo amin'ny fotoan'ny Purple Zoma, andro iray ho an'ny mitovy lenta, homosexualité, bisexual, transgender sy intersex mpianatra, " nieuws.nl amin'ny 14 Desambra. Tsy nahatsikaritra izany aho nandritra ny fotoana fohy, saingy lasa crazier izany. Ny tanora dia tondraky ny fampielezan-kevitr'ireo lahy sy vavy ary na ny mpampianatra sy ny mpampianatra (teny tsy misy dikany aza) dia mampiditra ny tenany ho amin'io fanokafana io.
Ny fampielezan-kevitra dia manomboka manaiky ny vavolombelon'i Jehovah, toy ny ampahany. Miaraka amin'ny avana ho toy ny marika lehibe ho an'ity fivavahana vaovao ity, ny antokon'olom-bitsy vaovaom-pirahalahiana dia toa miteraka fahalemena kokoa noho ny hetsika ara-pinoana hafa. Tena tsara tokoa ny manondro ny extremisty Miozolomana any Holandy, saingy ny fampifanarahana amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy dia milanja sivily. Fanabeazana, fahitalavitra, politika: ny zava-drehetra sy ny rehetra dia tena manolo-tena amin'izany. Miaraka amin'i Femke Halsema ho mpisava lalana vaovao eo an-toerana any Amsterdam, dia mbola henjana kokoa ny filazantsara tsy manambady. Satria tokony hampiroborobo ny zava-drehetra izay tsara ho an'ny asa ara-politikanao ianao ary aza manahy ny vokatra maharitra.
Ny teny lamaody vaovao dia ny 'fahasamihafana'. Ny sehatry ny fandraharahana dia tokony hamporisika ity 'fahasamihafana' ity ary hitanao fa ny politika dia mamporisika ny orinasa hanome 'fahasamihafana' bebe kokoa. Ny fehezan-teny iray hafa misongadina dia ny 'inclusiveness'; raha ny marina dia misy teny Orwellian teny ho fanesoana ny heterosexual.
Ny tanànan'i Amsterdam dia efa nitarika ny lahatenin'ny fanambarana tsy ara-dalàna. Tsy misy 'ankizivavy sy raim-pianakaviana' voantso ao anaty fiaran-dalamby an'ny NS, fa amin'izao fotoana izao kosa no "mpandeha tsara indrindra". Mbola tsy miresaka momba ny toetoetran'ny lahy sy ny vavy. Ny fisian'ny fahasamihafana dia i George Orwell ny filazana ny endrika fanavakavaham-bolonkoditra fasisista hanaisotra ny heterosexual. Toy izany koa ny teny hoe "fitoviana"; Teny iray izay mitondra ny tanjona faratampony amin'io hetsika io, izany hoe izay mahatonga antsika rehetra tsy hisafidy. Na dia mpihira Celine Dion aza ankehitriny mampiroborobo io fiteny io (jereo ny lahatsary etsy ambany).
Mazava ho azy fa tsy ara-dalàna ny politika ary tsy isalasalàna fa lazaina ho 'hala-malala' raha milaza zavatra momba azy ianao, saingy angamba izao no fotoana handavana ny fahamarinan'ny politika. Niditra tao ambany Halsema izy fialan-tsasatra ho an'ireo manamboninahitra ao Amsterdam izay maniry ny hiova fo dia porofo mazava fa manalavitra ny politika ny fivavahana mahery fihetsika.
Ny ankamaroan'ny olona dia mahita fa tena mahafinaritra tokoa izany fironana izany. Toa misy karazana hipoka, toerana izay hipoitra sy malalaka raha toa ka misokatra amin'ny fiovan'ny fiarahamonina ianao. Izy io dia karazana tohiny ny fanekena ny pelaka lahy sy ny lesbians ary ny vondrona efa nandray ny toerana masina amin'ny alalan'ny onja fampielezan-kevitra teo aloha fa ny lazany manokana mba ho jolly amin'ny Amsterdam Gay Pride ahazoan'ny. Tsy misy ratsy amin'izany raha manaiky ny olona tahaka azy ireo sy ny antoko fanao mahafinaritra dia manao tsara foana. Raha maniry hanao firaisana ara-nofo ianao, dia toy izany ihany koa. Ary mazava ho azy fa tsy voavakavaka ianao. Na izany aza, misy fahasamihafana goavana eo amin'ny fanekena, ny famotsorana sy ny fampielezan-kevitra. Toa tsy mahatsikaritra intsony ny fampielezan-kevitra ny olona ary mahita fa ny vokatr'izany dia ny vokatry ny teo aloha ihany.
Nalainay avy eny amin'ny sainam-pirenena mavokely mankany amin'ny sainan'ny avana. Ny Greenpeace sy ny EO angamba no voalohany nanosika ny marika hampiavaka ny sainan'ny avana ary ny "misy fanantenana" ny stickers. Fotoana fohy monja i Arie Boomsma no mamolavola na manambara tampoka fa ny zanany lahy dia mahatsapa fifindra-monina.
Ny biolojia manerana izao tontolo izao dia mitaky fananganana fa misy lahy sy vavy manao izany miaraka mba hanan-janaka. Mazava ho azy fa misy ihany koa ny zavamaniry hermaphrodite sasany na karazana biby, saingy miresaka momba ny maro an'isa izahay. Ankehitriny dia hitantsika fa afaka manamboatra plastika solika isika ary ny ranomasinay dia feno PCBs. Raha ny marina, ny sakafontsika sy ny fisotroan-drononon'ny rano dia feno feno fanenitra. Ary rehefa mahazo izany ny reny, dia efa tafiditra ao anatin'ny ran'ny foetus ireo hormones tompon'andraikitra amin'ny famaritana ny lahy sy vavy. Mety tsy ho toy izany koa ny cromosomes. Ny ampahany vokatr'izany dia vao haingana dia maro ny zaza teraka izay mihetsiketsika kely eo amin'ny lahy sy vavy, ary maro kokoa ny lehilahy manana tarehy vavy na mifamadika amin'izany. Noho izany dia tsy tokony hahagaga raha maro kokoa ny zaza vao teraka raha mbola tsy mazava ny firaisana. Na izany aza, raha izao dia 25% amin'ireo ankizy, mbola azonao an-tsaina ihany ity onja fampielezan-kevitra ity, saingy tsy izany no izy. Mazava ho azy fa tokony hanana fahatakarana sy fanekena ho an'ity taranaka vaovao ity, saingy tsy momba ny 25% ary ny fanadihadiana izay mampiseho 4% dia tsy tena matanjaka loatra (jereo eto). Ankoatra izany, dia hampifanaraka ny fiarahamonina manontolo amin'ny vondron'olona faran'izay henjana ianao. Sa angamba ny fikasan'ity vitsy an'isa ity ho lasa maro an'isa amin'ny ho avy tsy ho ela?
Eny, izany no fikasana. Miresaka momba ny fivavahana vaovao eto izahay. Izany no mahatonga ny Mpitantana Evanjelika koa manao asa lehibe. Jan van den Bosch no voalohany ('tsy nampihatra') pelaka izay tonga nalaza teo amin'ny fantsona. Arie Boomsma dia mpanohana lehibe ny fampielezan-kevitra teo aloha; ny maha-fanandevozan'ny pelaka azy, izay ahitana ny teny hoe 'famotsoran-keloka' George Orwell dia vaovao ho an'ny 'fampielezan-kevitra'. Ny EO koa dia ho mpisava lalana manan-danja amin'ny fampiroboroboana io fivavahana vaovao io. Isika miresaka momba ny Luciferian fivavahana, ny avana maneho ny maha-olombelona mikosoka nivoaka avy ny Safodrano sy ny Vata, maneho ny fototarazo fehezan-dalàna izay niafara araka ny Tadala onja vaovao manerana an'izao tontolo izao. Ny avana izay niseho ao amin'ny Baiboly momba ny faravodilanitra rehefa Dove Noa (koa no tena marika) nandao fledging, ary indray tany eo anatrehany, dia famantarana ny safo-drano sy ny fiovam-fiantraikany lehibe. Izany no mariky ny fidiran'Andriamanitra. Izany no marika nataon'i Losifera.
Raha ny marina, efa androany ny tondra-drano vaovao. Fihetsiketsehana mihoampampana izay hanafoana ny maha-olombelona amin'ny toerana misy azy ankehitriny. Tsy amin'ny rano, fa amin'ny alalan'ny teknolojia.
Ny lehilahy vaovao dia hitondra ny toetran'i Losifera. Losifera, izay matetika no aseho ho toy androgynous na osy hermaphroditic Baphomet, foana ny Andriamanitry ny Baiboly (na fivavahana hafa) teo amin'ny miafina, fa tsy afaka miala amin'ny fiangonana-taranaka boomers zaza hatrany amin'ny transgenders. Tsy maintsy natao izany tamin'ny dingana iray izay azo antoka fa tsara tamin'ny lafiny sasany. Mazava ho azy, ny vehivavy dia mila miala amin'ny fahaleovan-tena ary lasa mahaleo tena. Mazava ho azy fa tsy maintsy ekena ny homosexuel. Ny sécularisation, arahin'ny hery mamirifiry sy ny famotsorana ilay vehivavy; dia nanaraka ny fanandevozan'ny pelaka. Na izany aza, tao anatin'ny fandrisihana, nanomboka ny fampielezan-kevitra ny fanandevozana. Ny fifindrana mankany amin'ny olona mpandika teny vaovao dia ny fiovan'ny fivavahana vaovao manerantany: ny finoana latte-pinoana any Losifera. Eo ambany fitarihan'ity fivavahana vaovao ity, dia tsy maintsy mandalo safodrano vaovao ny mponina eran-tany. Ny biolojia amin'izao fotoana izao dia tokony hofongorana. Eo ambanin'io fivavahana vaovao io, ny olombelona dia tokony hitondra ny toetran'i Losifera ary ho lasa hermaphrodite.
Ity tetezamita ity dia nampiasaina, ankoatra ny zavatra hafa, ny plastika eo amin'ny tontolo iainantsika, fa ny onjam-pamoretana lehibe dia mbola ho avy. Ny tondra-drano lehibe dia hivoaka amin'ny lalàna izay hampidirina eran-tany. Ny lalàna mitaky maintsy vaksiny tokony, ny ADN rehetra vokany niraikitra tao ny Vata (ADN banky angona) ary dia toy izany no nanamora ny nanaovana dia ny manova ny olombelona amin'ny ambaratonga lehibe avy any anatiny. Isan-kerinandro isika dia miala amin'ny biôlôjia taloha. Raha te hahafantatra tsara ny fomba fiasanao ianao dia afaka mamaky ity lahatsoratra ity tahaka ny tsara.
Ny olona mpandika lalàna dia tokony ho lasa fenitra vaovao, miaraka amin'ny famokarana sy ny fitaizana eo am-pelatanan'ny fanjakana. Io ihany koa no dingana voalohany ho an'ny dingana farany. Satria hatramin'izao fotoana izao dia afaka manapa-kevitra ny ho 'liberal' amin'ireo fiovana mahaliana sy mahafinaritra. Farany, ianao dia olona maoderina ary mety mino ianao fa tsy maintsy manaiky ny fiovana rehetra avy amin'ny hevitra hoe 'fivoarana' na 'evolisiona'.
Ny dingana farany amin'ity fifindrana ity dia ilay iray izay ahitantsika indray ny teny hoe 'trans'. Ny transgenderism no dingana voalohany ho an'ny transhumanism. Izany no dingana izay hisolo ny biolojia tany am-boalohany ho solon'ny teknolojian'ny nano. Andriamanitra (Losifera) te hanolotra antsika ny fiainana mandrakizay (ny tsy fahafatesan'ny transhumanism). Manomboka mahatakatra ny anjara asan'ny EO ve ianao? Ilay "Jesosy" dia hidina avy eo amin'ny rahona mba hanolotra ny olombelona ity fiainana mandrakizay ity dia mora takarina raha mandalo amin'ny transhumanism.
Ny Transhumanisma dia te hanao ny tsy mety maty. Hitantsika fa tsy mety maty ny fivavahana rehetra. Tena manahirana tokoa ny transhumanism. Iza no tsy te hiaina mandrakizay? Io no tantely rehetra nataon'ireo fivavahana eran-tany. An'arivony tapitrisa no efa tonga nandritra ny taonjato maro. Ny Transhumanisma, na izany aza, dia ny vavahadin-tserasera ho an'ny Singularity ary izany no dingana izay ahafahan'ny fanahin'olombelona ao amin'ny rafi-raharaham-borona antsoina hoe LA. Ny maha-olombelona amin'ny maha-transhuman mpanova fandefena amin'ny endriny nomerika izay miditra amin'ny rafi-pitantanana ao amin'ny rahona. I Losifera dia efa Andriamanitra sy satana tamin'ny fanovana ny dualisma ao amin'ny Baiboly ary mbola fivavahan'ny EO sy ireo mpihetsiketsika tsy dia miresaka momba ny transagéniste ho toy ny dingana ho an'ny transhumanism sy ny fifamotoana amin'ny AI. Ny fanandevozana farany na ny evolisiona?
Amin'ny ankapobeny dia ara-dalàna ny vaovao.
Lisitry ny rohy loharano: nieuws.nl, rtlz.nl
Tags: Arie Boomsma, EO, fampielezana evanjelika, Featured, lahy sy ny vavy, gender neutral, Losifera, avana, an'ohatra, famantarana, transgender
20 Desambra 2018 ao amin'ny 11: 06
20 Desambra 2018 ao amin'ny 13: 40
Ankehitriny! Ny fisehoan-javatra any Grande Bretagne dia zavatra momba ny tsy fisian'ny asa, saingy avy eo ny
sary izay napetraka ao, mety hiantso azy ho farafaharatsiny mampihetsi-po, mahery setra ary propagandista.
Tsy azonao atao ny mitsambikina (pssst lekker ding) amin'ny hafa fa ny gazety / ny fanjakana ary ny hery ahafahanao mametraka ny zava-drehetra amin'ny tsy voajanahary.
Tokony hisy ny Rainbow Umbrella tena mandeha eo anoloan'ny birao ve?
avy amin'ny UWV,? Tena mila izany ve ??? (ankoatra: miaraka amin'ny marika satenty amin'ny famantarana ny UWV, ho an'ny mpandinika).
20 Desambra 2018 ao amin'ny 13: 45
Miantso any an'efitra!
20 Desambra 2018 ao amin'ny 14: 08
Tsy toa hafahafa ianao mety sofina Fa ny olona izay heverina ho nisolo tena an'i Rosia mamokatra bebe kokoa fotsiny avana sainam-pirenena eny an-dalambe (izay efa hita ao amin'ny Maritime Museum Taona maro lasa izay), nahoana?
Satria noho izany ireo vahoaka izay heverina ho voavotsotra amin'ny gazety, avy amin'ny mpanao gazety, faly amin'ny saintsika (hu HU).
Faharoa, miresaka momba ny lehilahy manambady fotsiny ilay lehilahy fa tsy mitovy amin'ity lahatsoratra ity momba ny fandaharam-potoana sy ny vokany.
Izy ihany no mitabataba zavatra, ary tokony hamerina antsika amin'ny Rosiana izany, ary mbola feno ny lalao mamy. Eny, nanosika ny valim-pifidianana ny Rosiana, ha ha ha
20 Desambra 2018 ao amin'ny 13: 58
Raha tsy ara-dalàna ny tena, dia ara-dalàna ny vaovao. Midika izany, raha ny marina, izany no fikasan'ny Club izay nihevitra fa tsy hisy na inona na inona intsony ny taboo. Azo atao ny zavatra rehetra! Tsy eo intsony ny sisin-tany sy ny fahatsapan-tena. Tsy voatery hanazava ny fialam-boly ataon'ireo mpikambana ao amin'ny klioba ny miala. Saingy eny, fantatsika fa miaina anaty jadona mangina isika ary ny mpanompo rehetra dia tafiditra avokoa. Ny iray henjana kokoa noho ny iray hafa mba hampifaly ny tompony. Ny fampielezan-kevitra dia miloko amin'ny endrika "governemanta" sy politika. Ao amin'ny fanjakana misy ny lalàm-panorenana, ny 'governemanta' dia tsy maintsy manaparitaka ihany koa ny toe-javatra hafa mifanohitra aminy izay mbola ara-dalàna. Tsy maintsy misy fifandanjana. Azontsika atao ny manadino izany miaraka amin'ireo olona ahiahina ao amin'ny rafitra. Fotoana izao hanovana ny fitondrana. Ankehitriny na na oviana na oviana. Mazava ho azy fa ao anatin'ny faran'ny lalàna.
20 Desambra 2018 ao amin'ny 14: 10
Ao Poesje dia sahirana izy ireo amin'izany
20 Desambra 2018 ao amin'ny 14: 55
Mazava ho azy, fantatra ihany koa fa ny governemanta dia miara-miasa / mifandray amin'ny Loesje na Poesje. Ny "hafatra" an'i Poesje avy eo dia miara-misaraka amin'ny tsy manan-tsiny, mamy toy ny pussy ary Loesje dia mijery tsara sy malefaka izay mety ho diso. Amin'izany fomba izany, ny "hafatra" voajanahary dia amidy ihany koa ho mora azo alaina, salonfahig. Pussy dia iraisam-pirenena. Tsara ihany koa ny any ivelany. Octopus hey.
Nihevitra ny momba izany tamin'ny governemanta izy ireo. Ny zavatra rehetra dia tendrena any Holandy.
20 Desambra 2018 ao amin'ny 15: 17
Tsia tsia, nisafidy ny anarana Poesje aho noho ny antony telo:
1. Mahafantatra an'i Loesje ny tsirairay
2. Ny Pussy dia mitovitovy ary raha toa i Loesje
3. Pussy dia tenim-pirenena ary tsy lahy sy vavy
20 Desambra 2018 ao amin'ny 20: 10
Novalian-tsoa haingana. Tsy azonao ny vazivazy. Asa goavana no ataonao. Miala tsiny amin'i Loesje.
20 Desambra 2018 ao amin'ny 16: 51
Ny mpikatsaka ny marina sasany dia ao anatin'ny karazana fomba tsy ahazoan'izy ireo ny vazivazy intsony. Izy ireo dia mamely karazana olona mandositra ary maniry manokana hamaly avy hatrany ny heviny. Mahita izany ianao. Vao haingana dia nisy vahiny nampisavorovoro izay tsy nahatakatra ny 'sivana taratasy ofisialy nataon'i Rutte'.
21 Desambra 2018 ao amin'ny 14: 01
Marina izany. Izaho dia "vahiny miala tsiny" tamin'izany fomba izany, ary nihetsika haingana aho tsy nieritreritra izany mialoha. Tokony ho samy hafa ihany koa izy io. Miaiky aho fa diso aho, voalaza fa tsy hitako avy hatrany ny zava-drehetra. Fa mba hampifangaroana olona iray avy hatrany dia afaka mitondra ahy amin'ny fisotroan-dronono koa izy ireo.
24 Desambra 2018 ao amin'ny 21: 54
Ah, ny fanamarinana dia mety tsy maratra. Aza milaza fotsiny ny zavatra hafahafa ao anaty fiara eo amin'ny lalana mankany- ary any amin'ny efitrano fitsaboana amin'ny dokotera. 😀
xdenhaag nanoratra hoe:
13 Janoary 2019 ao amin'ny 14: 50
Misaotra anao mizara; Nankafy izany indray aho. (eny izany fanalam-baraka izany)
"'Ny fiara fitaterana dia tahaka izany' tamin'ny volana septambra 1995 dimy herinandro voalohany tao amin'ny Dutch Top 40."
Mandehana ary ambarao amin'ny zanakao izany. 😀
20 Desambra 2018 ao amin'ny 20: 56
Manaiky tanteraka! Ny ankamaroan'ny olona dia reraka tanteraka, saingy nanan-jara tsy ara-dalàna an'i Jesosy teo amin'ny rindrina nandritra ny taona maro.
Tsy ny fotoana farany fa efa nomanina nandritra ny taonjato maro, ny taona farany dia mitaky endrika faratampony.
Ny ankamaroan'ny mpivavaka dia hanamafy ny tantaranao fa tsy miala amin'izany. Mavesatra loatra izany raha tsapanao fa efa voafitaka ianao hatramin'ny nahaterahanao.
Raha teraka amin'izao fotoana izao ianao ary tsy mahatsapa ny fampiroboroboana sy ny fandaharana dia ho feno fanafody izy ireo. Ny dadanao sy ny mamananao dia mahazo antoka fa mandray ny fanafody isan'andro ianao, lasa tsara sy mangina izy ireo.
Nahoana no be dia be loatra ny olona tsy mitsaha-mitombo, mihalehibe, ary miserana? Tsy maintsy mamakivaky izany ianao, tsy maintsy mahatsapa izany ianao ary raha manafoana izany ianao dia manjavona ny baomba.
Tsy misy i Sinterklaas, hitanao any amin'izay zavatra mitranga rehefa tonga any amin'ny fandaharana (fandikana) ianao, dia miady mafy mba hitazonana izany.
Ao anaty boaty izahay ary mankalaza izany isan-taona amin'ny 25 (X) sy 26 (Y) Desambra.
Aza hadinoina fa raha nofantsihana teo amin'ny hazo fijaliana ianao ho toy ny mpitsoa-ponenana sy solontenan'ny fahamarinana, ny fahasamihafana dia ny famokarana ny kibonao (boaty).
Manantena aho fa hamonjy olona maro avy amin'ny boaty mahazatra miaraka amin'ny tantaranao indray ianao amin'ny taona vaovao!
20 Desambra 2018 ao amin'ny 21: 03
21 Desambra 2018 ao amin'ny 10: 40
Fantatsika izao hoe inona no tena i X.
21 Desambra 2018 ao amin'ny 13: 03
Raha tianao ny olona amin'ny fandaharam-potoana, dia ho bombardier ianao ... ary tongava soa ho an'ny vaovao ara-dalàna!
Sent: Friday 21 December 2018 12: 36
Subject: [NUjij] Ny kaontinao dia natsahatra vonjimaika.
SalmonInClick tsara indrindra,
Mifanaraka amin'ny fitsipika NUjij dia voarara ny kaontinao. Tsy avelantsika hiampanga antsika amin'ny tetika / fikomiana ao amin'ny NUjij.
Mandritra ity fandraràna ity dia tsy afaka mamaly ianao, manaja na miresaka amin'ny hafa NUjijers. Atsofohy ny resaka mandritra ny andro 1.
24 Desambra 2018 ao amin'ny 11: 09
Soa ihany fa resaka momba ny fandrarana vonjimaika fotsiny izany.
Nofoanana tanteraka 7 taona maro lasa izay aho.
Ary heveriko fa tena ratsy tokoa ny tsy hahafahako mametraka intsony. ahum ....
Tsy izany !! Fandaniam-potoana sy hery kely fotsiny ny famakiana ireo tranokala toy izany, ary tena manahirana tanteraka ny fihetsik'izy ireo. Raha mbola mametraka ny "ondriandrinao izy!" Fanehoan-kevitra, mandeha tsara fotsiny izany.
Ary iza no helo ary ny helo? Ny feon-kira toy ny lehilahy pelaka jody, fa mino ahy, tsy tokony ho tonga saina ianao amin'izany.
Ireo karazana hafatra ireo dia ampiasaina amin'ny 2-fly-in-1-slap-data-mining.
ny "fandaharanasa isan-karazany", ny Jiosy, ny reny mpanohana ny gay. Ao daholo ny zava-drehetra.
Ary raha ny momba ny jiosy, ny olon-drehetra, indrindra fa amin'ny "firenena vaovao" dia maniry ny hanafika ny Isiraely. Fa izany dia ampahany amin'ny fandaharam-potoana. Ken O Keefe, Veterans Today sy ny tafika iray manontolo dia nanolotra ny zaridaina tsara. Ny 911 dia natao ihany koa araka ity club ity (tsy mandeha amin'ny tena zava-misy) avy amin'ny Mossad miara-miasa amin'ny CIA. Ary ity indray dia 2 manidina amin'ny fipoahan'ny 1.
24 Desambra 2018 ao amin'ny 16: 37
@ClairVoyance, manana trosa tsy manam-petra (maharitra) aho eo amin'ny pantsiko. Tsy miraharaha an'izany aho, zava-dehibe kokoa ny fanahy very izay mamaky io karazam-pihetseham-po ilazana izany sy mivantana.
Ny famantaranandro dia mifantoka ary manantena aho fa afaka mamadika ny tondra-drano. Tsy vitan'ny hoe tsy sahy manatsara ny fiainako aho, fa momba ny hafatra! Ny teknika koa dia azo ampiasaina amin'ny mpitondra, ny co-op dia antsoina hoe. Nanjary matanjaka be ny tambajotra an-tserasera ary ankehitriny dia misy mihitsy aza ny resaka politika amerikana ary tiako ny handao izany amin'izany .. 😉
24 Desambra 2018 ao amin'ny 12: 11
Ireo fivoriambe ankatoavin'ny fanjakana dia tsy mahazo mitsikera. Izany no antony nandrarana anao ary afaka mieritreritra ny 'fahotanao' ianao ao anatin'ity didy jadona mangina ity izay tian'ireo andevo hiara-miasa.
24 Desambra 2018 ao amin'ny 20: 36
Marina izany, ary avy eo dia valio ny nujij indray rahampitso, fa mandehana an-tongotra tsara, raha tsy izany dia mety ho voarara maharitra ianao. Ary tsy mahafinaritra izany satria tsy afaka hamoy ny atody intsony ianao .. .. hahaha izay sangisangy fohy.
Lazao ahy, salady voina, misy fantsom-peo mahazatra kokoa ve ataonao amin'ny "hamoha ny ondry"? Tsy fantatro raha efa mialoha ianao, fa amin'ny ankapobeny dia heveriko fa manamora kokoa ny fametrahana ny herinao. Ny ondrin'i nujij dia tsy mendrika izany. Avelao ho faty izy ireo. Mivelatra ary avelao izany.
So prans !! Tsy hoe noho ny fianjeran'ny tsenam-bola novolavolaina ihany, fa amin'ny kely fotsiny ny vintana eo an-tampon'izany ihany koa ny vokatrin'ny Grand Solar Minimum (Eddy Minimum) izay ahitana ireo famantarana voalohany hita maneran-tany mandritry ny herintaona na 3. Ary na dia mbola hita fa any Eoropa Andrefana aza izy ireo amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo tsy fahampian-tsakafo ireo noho ny ririnina sy ny hatsiaka amin'ny lohataona, (fa koa ny orana sy ny orana) any Etazonia sy Kanada, dia tsy mora izany. Ary raha hisy ny tsy fahampian-tsakafo goavana amin'ny taona ho avy, dia hanana vokatra koa ny vidin'ny ankamaroan'ny sakafo eto Eoropa. Ny vidin'ny sakafo maro dia efa manjavozavo. Ny olona eto Frantsa dia afaka mividy voankazo sy legioma mena ao amin'ny Lidl, 1 euro ho an'ny boaty iray feno voankazo sy legioma mafana noho ny ranomandry. Great of that Lidl! Izany koa no hitranga any Holandy. Ary ny antsy manapaka amin'ny andaniny roa satria voan'ny kanseran'ny tsina avy amin'ny sakafo matsiro.
Azafady, aza mamaly an'io farany io satria tsy tanjoko ny mandefa torolàlana iray hafa.
25 Desambra 2018 ao amin'ny 12: 24
Ny fehintsoratra voalohany anao dia midika fa efa fantatrao hoe iza na inona na inona ataoko, tsy hanao izany mihitsy Na izany aza dia hanandrana fohifohy aho hanazava hoe iza aho ary rehefa navadika ho fanehoan-kevitra ny hevitro. Ny fidina ho ahy sy ny fianakaviako dia ny fifanarahana tany Lisbonne, izany no lohahevitra nanokafako ny hevitro ho asa ary nanapa-kevitra ny handao an'i Holandy ho any Scandinavia. Miaina ao amin'ny faritra be mponina izay mipetaka ny haavon'ny taratra, ny anaram-bosiko dia mamadika ny zavatra ataoko ary misy ny fanjonoana salmon, afaka mahita ny salmon ianao. Manana lakozia vita amin'ny voankazo ihany koa izy ary midika koa ny heloka bevava mihatra amin'ny NL ohatra Gerrit Zalm taorian'ny nanombohan'ny famerenana tao amin'ny DSB / ABN, i Riffian dia nandraman'ny 😉
Nanomboka ny Prepping ho ahy ao amin'ny 2010 (QE1), afaka nanangana tambajotra sosialy tsara teo an-toerana aho ary nandritra ny fotoana fohy dia nianatra nihaza aho. Mampitombo legioma miaraka amin'ny fiaraha-monina ao anaty alimo iray ho an'ny kalitaosy. Manantona ny toekarena eo an-toerana izay azo atao ... tantara lava vitsy, azoko fa ny fihetsika amam-pihetsiketsika dia manjavozavo amin'izany. Fa toy ny ranomandry any amin'ny masoandro izany, rehefa mijery ny zanako aho 😀 Cheers!
26 Desambra 2018 ao amin'ny 22: 40
ZalminBlik, Misaotra ny fanazavana. Tena sahy ianao fa efa niova lalana.
28 Desambra 2018 ao amin'ny 13: 22
@ClairVoyance sy ny tsirairay ao amin'ilay tranonkala, dia mihazona ny herim-po avo, ny fanahy dia tsy ao anaty tavoahangy! Tsara ny taona vaovao ary mety hahazo ny marina!
24 Desambra 2018 ao amin'ny 12: 10
7 Janoary 2019 ao amin'ny 17: 47
Ao Amsterdam dia misy hatrany ny antony hananganana ny saina avana.
Inona no ataon'ireo avana avaratra amin'ny kianja maro, tsy maintsy mandeha amin'ny baolina kitra aho
ary ny zavatra voalohany nipoitra dia avana lehibe aviavy (ambony) ??? amin'ny sehatra fanatanjahan-tena ara-dalàna izay ahafahanao milalao baolina kitra, tsy misy klioban'ny klioba, tsy misy sainan'ny ranomandry, nahoana ??? nahoana no amin'ny soccer football
« Ny taratasy tsy nosoratana avy amin'i Mark Rutte: Holandey malala
Ny fianjerana ara-toekarena izay efa nambara mialoha dia tonga: Merry Christmas »
Mampidi-doza ny 5G ary ahoana ny fametrahana mangingina azy io
Namono tena tao amin'ny sela i Jeffrey Epstein (fanavaozana)
bartelo op Ny avana dia misolo tena ny fivavahana mpankafy fa ny mpanohana kosa mihevitra fa miady ho an'ny 'fahasamihafana sy fahatsapan-tena' izy ireo.
Danny op Mampidi-doza ny 5G ary ahoana ny fametrahana mangingina azy io
Martin Vrijland op Ny avana dia misolo tena ny fivavahana mpankafy fa ny mpanohana kosa mihevitra fa miady ho an'ny 'fahasamihafana sy fahatsapan-tena' izy ireo.
guppy op Mampidi-doza ny 5G ary ahoana ny fametrahana mangingina azy io
Mifandraisa anjara amin'ny 1.610 hafa